"Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf Hanoolaado, Yuusuf Garaad ha dhaco", Dad u badan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool UK kana soo jeeda Puntland oo shalay ku dhawaaqayay ereyadaasi. Ruunkinet 04/02/07
Qaar ka mid ah jaaliyadda ku nool dalka Ingriiska una badan reer Puntland ayaa shalay ka dhigay mudaaharaad daarta Bush House oo ay uga soo horjeedaan Yuusuf Garaad Cumar oo ah madaxa BBC-da laanteeda AfSoomaaliga.
Dadkan oo u badnaa haween sitay boorar ay ku qoran yihiin BBC-da waa Warlord ayaa qaarkood waxay ku qeylinayeen ereyo ay ka mid yihiin Yuusuf Garaad ha dhaco, madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ha noolaado.
Sidoo kale, waxaa halkaasi aan immaan qaar badan oo soo qaban qaabiyay mudaaharaadkan kana tirsan waxgarad, aqoon yahanno iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland kadib markii ay heleen taageerayaal si weyn u taageersan madaxweynaha oo aan ka soo jeedin Puntland una diyaar ah in ay fuliyaan hadafka bannaan baxa.
Dadka mudaaharaadayay ayaa ay ka muuqtay kalsooni ah in xilka laga qaadayo Yuusuf Garaad loona dhiibayo shaqsi ka soo jeeda Puntland madaxa laanta AfSoomaaliya ee BBC-da in kastoo ay dad badani aaminsan yihiin in maamulka BBC-da uu ka duwan yahay maamulka ka jira magaalada Baydhabo.